Apple Music: Zvakakosha Izvo Here? Ichi chave chiitiko changu | Ndinobva mac
Yakafananidzwa | | Apple Music, dzakawanda
Apple yekumhanyisa mimhanzi sevhisi akaona mwenje wezuva gore nemwedzi mina yapfuura. Pakati pechikamu chekutanga chehupenyu, vese vashandisi vaida kunakidzwa neshumiro uye mabhenefiti ayo mahara zvachose. Iye zvino taona nhau muapp yeIOS uye neshanduro yayo mukati meTunes yeMac.Vazhinji uye vazhinji maartist chete uye mukati memwedzi uno Apple Music Festival, kunakidzwa neakakura maartist anorarama.
Zvakanaka, Izvo zvakakosha here kunyorera kune ino sevhisi? Zvakaoma here kuchinjika kana zvinogona kupa imwe mhando yematambudziko? Ngatione pazasi zvazvinoreva chaizvo kune vashandisi, zvakanakira uye yavo yega kana yemhuri chirongwa. Ini ndichaenzanisirawo positi nezvakaitika kwandiri uye zvemhuri yangu, vanga vachitove vachinakidzwa nekuzara kweinenge mwedzi mishanu.
1 Chii chinonzi Apple Music chinokupa?
2 Chiitiko chemhando dzakasiyana dzevashandisi
Chii chinonzi Apple Music chinokupa?
Yese mimhanzi iri munyika, kana kuti ndoda zvese zvacho, pane ako ese zvishandiso nemidziyo. Pamhepo kana kurodha pasi. Pamunwe wako. Tsvaga uye wedzera kuMimhanzi yako, dzimwe nguva haufanire kutsvaga chero chinhu. Iko mashandiro acho pachawo anokuraira pane maalbum, playlists uye maartist zvinoenderana nezvaunoda uye zvaunofarira. Iwe unogona zvakare kuongorora mimhanzi mhando uye zviitiko senge Apple Music Mutambo. Nhau muindastiri yemimhanzi, nziyo, makonzati, mavhidhiyo mavhidhiyo uye rwiyo rwemhanzi Pamusoro pechinyakare kana genre mawairesi uye Beats 1 nhau. Dzinopfuura mamirioni makumi mana nziyo muhomwe yako pakangobata chigunwe chako. Uine kana usina internet, wakasarudzika kana kwete uye maawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva manomwe pavhiki, mazuva makumi matatu nemazana matatu pagore.
IOS 10 inosanganisira zvakare inonakidza interface, kunyangwe vamwe vashandisi vasingazvifarire pakutanga. Uye izvo zvinounza matsva mabasa. Chinonyanya kuzivikanwa ndeye Rwiyo Rwiyo. Unoda kuimba here? Unofarira karaoke here? Zvakanaka, iwe uchada kuve nemazwi enziyo dzako dzese nguva dzose aripo. Sarudza uye tsvaga vaunofarira maartist, wedzera ivo kumimhanzi yako ipapo uye usarasikirwa nechinhu. Unoziva here kuti zvakasununguka sei kuteerera rwiyo paterevhizheni kana mumugwagwa uye woita kuti utorwe kuchigadzirwa chako mumasekondi mashoma? Zvinoratidzika kwandiri sechinhu chinoshamisa, uye chete masevhisi ekushambadzira akadai seApple Music kana Spotify anotendera iwe kuti uzviite zviri nyore, zvakanaka uye zviri pamutemo, kunze kwekunge iwe uchitenga nziyo paTunes, iyo inodhura zvakanyanya uye haina kufanana.
Chiitiko chemhando dzakasiyana dzevashandisi
Mumhuri medu takanyorerwa Apple Music vanhu vana vane chirongwa chemhuri. Iri zano rinodhura € 14,99 uye rinobvumidza kupinda kusvika kunhengo nhanhatu. Tinobhadhara € 5 pamunhu, uye kune nhengo isingabhadhare chero chinhu zvakananga, uye kwete, handisi ini. Ndini maneja. Ini ndinonzwisisa Apple uye zvigadzirwa zvayo uye mazuva ese uye nenguva dzese dzandinoshandisa Apple Music, iyo kana Podcast. Imwe nhengo inoteererawo yakawanda uye inoda mimhanzi yakasiyana. Wechitatu, ndiani asingabhadhari, anosarudza mimhanzi muSpanish chete uye haasarudze dzakasiyana siyana, kunyangwe zvakadaro sevhisi yakasununguka uye haigone kurarama pasina iyo. Ini handizive zvakawanda nezve nhengo yechina. Gara kure ubhadhare zvechitendero. Haana kuda rubatsiro kuti ajekese nekushandisa sevhisi uye zvinoita sekunge anoifarira nekuti haana kunyunyuta kamwechete. Mwedzi mina yakatitorera € 4 imwe neimwe uye matatu ekutanga aive mahara. Kurudziro yangu? Kuti iwe unoyedza iyo yemahara nguva muchirongwa chemhuri uye wozofunga kana iwe uchiri kunyoresa kana kwete.
Ndakafunga kuti ndaizozvidemba uye kuti zvaizodhura. Hapana chaidhura, chaidhura kune Apple inotyora mamwe maratidzi. Kudzokera kuchinyorwa, ini ndinoteerera kune imwe chete, iyo yandaifunga kuti ingave iri dambudziko kune ino sevhisi, asi ikozvino ini ndinoshandura dzimwe nguva kune vamwe maartist andaiziva kana kwete, ezvinyorwa, zveRadio nezvimwe zvakawanda. Iyi haisi buffet yemahara, haufanire kuidya yese nekuti iwe watobhadhara kare, apa iwe unofanirwa kungonakidzwa nemumhanzi wako uye usatombo kunetseka nezve chero chimwe chinhu. Chaizvoizvo, edza kana uchida mimhanzi nekuti unenge uchida sevhisi iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Apple Music: Zvakakosha Izvo Here? Ichi chave chiitiko changu
Uye iwe unofungei nezve TIDAL iyo iwe yaunogona kurodha pasi HIFI mimhanzi?
TIDAL haandibvumire. Ndakaiyedza zvishoma uye ndichiri kusarudza Apple Music, asi hongu, iyi imwe sarudzo yakafanana. Uye isu tatoziva kuti Apple haisi kuzotenga, saka ivo vacharamba vachikwikwidza.
Mangwana tichava pakati pedu new macOS Sierra